अनावस्क रुपमा रिश उठेर हैरान हुनुन्छ??? रिस नियन्त्रण गर्न अपनाउनुहोस् यी ९ उपायहरु - IAUA
अनावस्क रुपमा रिश उठेर हैरान हुनुन्छ??? रिस नियन्त्रण गर्न अपनाउनुहोस् यी ९ उपायहरु
ramkrishna December 19, 2016	अनावस्क रुपमा रिश उठेर हैरान हुनुन्छ??? रिस नियन्त्रण गर्न अपनाउनुहोस् यी ९ उपायहरु
रिस कसलाई पो उठ्दैन र ? तर त्यो कति बेर रहन्छ वा त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने झन् संवेदनशिल पक्ष हो । धेरै थोरै रिस सबैमा हुन्छ । रिसले शारिरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा स्वास्थ्यमा समेत नराम्रोसँग प्रभाव पार्छ । बारम्बार रिसाउँदा नजिकको वा माया गर्ने मान्छेसँगको सम्बन्धमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ । रिसले व्यावसायिक जीवनमा नै आँच आउनछ । यदि तपाईलाई रिस नियन्त्रण गर्न गा–हो भइरहेको छ भने तल उल्लेखित केही टिप्स पालना गर्न सक्नुहुन्छ :
कमजोरी केलाउने : प्राय मानिसले अरुलाई मात्र दोषी देख्छ तर आफ्नो कमजोर हेर्दैन । झगडा वा रिस उठ्नका कारणलाई रचनात्मक तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसमा आफ्नो पनिा दोष हुनसक्छ । आफ्नो दोष छ भने माफ माग्दा प्रतिष्ठा बढ्छ । यसले सकारात्कम बाटोमा डो¥याउछ ।
Next Next post: विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, कस्तो छान्ने जिवनसाथी ?